Wararkii ugu dambeyay ee suuqa kala iibsiga Cayaartoyada %
By Ramzi Yare	 On Apr 28, 2019
Inkasta oo uuna wax heshiis ah haatan dhici karin oo uuna xiddig-na ku biiri karin koox kale hadana waxa ay heshiis la sii gaari karaan xiddigaha ay rabaan.
Tababaraha Kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa sheegay in xiddiga garabka uga ciyaara Real Madrid ee Gareth Bale iyo xiddiga ku dhaw in uu ku biiro Los Blancos ee Eden Hazard in ay u wada ciyaari karaan kooxda xilli ciyaareedka dambe (Marca).
Tababaraha Kooxda Napoli ee Carlo Ancelotti ayaa sheegay in uuna hor istaagi doonin daafaca Kalidou Koulibaly hadii uu dalab ka helo Man United (Mail).
Kooxda PSG ayaa doonaysa in ay 60 milyan ku dalabto xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Juventus ee Miralem Pjanic laakiin kooxda reer Italy ayaa doonaysa ugu yaraan 100 milyan oo euro (Corriere dello Sport).
Kooxda Man United ayaa badbaadsan karta lacag dhan 82 milyan oo mushahar ah hadii ay iibiso xiddigaha Paul Pogba, Alexis Sanchez, Ander Herrera & Romelu Lukaku (Mail).
Madaxweynaha Kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa doonaya in uu iibiyo Goolhayaha Keylor Navas suuqa xagaaga (Mail).
Amiirka Saudi Arabia ee Prince Mohammed Bin Salman ayaa ka rajo dhigay in uu iibsado kooxda Man United kadib markii uu horay u doonaya in uu ku iibsado 3.8 bilyan euro (Mirror).
Kooxda Juventus ayaa doonaysa daafaca dhexe ee kooxda Man City ee Nicolas Otamendi xilli uu xiddiga laftiisu raadsanyo koox uu joogto ugu ciyaaro (Mirror).
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Paul Pogba ayaa kooxdiisa u sheegay in uu doonayo in uu ku biiro kooxda Real Madrid xagaaga xilli uu haatanba heshiiska shaqsiga ah la gaadhay kooxda Real Madrid (AS).
Juvnetus ayaa dhankeeda doonaysa in ay Paul Pogba ku soo celiso Turin laakiin waxa ay marka hore u baahantahay in ay iibiso labada ama saddexda xiddig ee ugu muhiimsan kooxda si ay u hesho Xiddiga khadka dhexe (Observer).
Kooxaha Juventus ayaa sidoo kale isku dayi doonta in ay PSG ku garaacdo saxiixa Goolhayaha kooxda Man United ee David de Gea (Le10 Sport).
Kooxda Man City ayaa doonaysa saxiixa daafaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire laakiin Kooxda Dacawooyinka ayaa doonaya 90 milyan oo euro Pep Guardiola ayaa sidoo kale xiiso u qaba daafaca Liverpool ee Virgil Van Djik (Sun).
Kooxda Lyon ayaa heshiis u soo bandhigtay tababarihii hore ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger si uu kooxda tababare ugu noqdo dhamaadka xilli ciyaareedkan (L’Equipe).
Shaxda Rasmiga Ah Ee Leicester City Vs Arsenal
Arsenal oo mucjiso kala kulantay Leicester City